Tempolin'i Megalithic any Malta | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | 30/09/2021 17:00 | Nohavaozina amin'ny 30/09/2021 19:42 | Malta, Inona no ho hita
Manana an'izao tontolo izao toerana mistery, amin'ireo izay kely fantatra ary maro no heverina. Malta dia iray amin'izy ireo,, indrindra indrindra, ny tempolin'i megalitik'i Malta. Fantatrao ve izy ireo? Tsy manitikitika anao ve izy ireo?
Malta dia ao amin'ny Vondrona eropeana ary na dia kely aza izy io dia firenena iray onenan'olona maro. Eto, amin'ity jeografia hafahafa ity izay notsidihin'ny mpizahatany be dia be noho ny toetrandro mafana, dia misy telo Lova manerantany ary tempoly megalithika maro izay anisan'ny tranainy indrindra sy miafina indrindra eto an-tany.
2 Tempolin'i Megalithic any Malta
Izany dia fanjakana tsy miankina izay atsimon'i Italia ary na dia teo am-pelatanan'ny firenena isan-karazany nandritra ny tantarany aza izy io dia nanomboka tamin'ny 1964, tena mahaleo tena. A fanjakan'ny nosy ahitana nosy telo, Malta tenany, Gozo ary Comino. Misy nosy kely hafa koa.
Ny toetrandro any Malta dia mafana amin'ny fahavaratra ary amin'ny ririnina dia kely ny orana. Izany no mahatonga ny mpizahatany maro mandeha. Ho an'ny moron-dranomasina ary mazava ho azy, ho an'ireo tempoly megalithic izay liana fatratra.
Misy tempoly fito misy megalithic ao Malta izay eken'ny UNESCO ho toerana misy ny vakoka manerantanys. Any Malta sy any amin'ny nosy Gozo izy ireo. Amin'ny voalohany dia misy ny tempolin'i Hagar Qim, Mnajdra ary Tarxien, Ta'Hagrat ary Skorba raha any Gozo kosa dia misy ireo tempoly goavambe roa an'i Ggantija.
Izy rehetra dia firafitra prehistorika goavambe nino fa naorina nandritra ny Arivo Taona fahaefatra sy fahatelo BC Izy ireo dia anisan'ny rafitra vato mijoro voalohany eto an-tany ary manaitra ny endriny sy ny haingon-trano. Ny marina dia miavaka sy sarotra ny sangan'asa tsirairay amin'ny zava-bita ara-teknolojialy soloin'izy ireo.
Nilaza ny mana-pahaizana manokana fa ny tsangambato tsirairay dia samy manana ny teknika, ny drafitra ary ny articulation misy toetra mahazatra toy ny patio elliptical eo aloha sy ny facave concave. Amin'ny ankapobeny, ny fidirana dia eo anoloana, eo afovoan'ny façade, dia mivoha amin'ny lalan-kely misy tokontany misy rarivato ary ny atitany dia misy efi-trano boribory boribory symetrika voarindra amin'ny lafiny roa amin'ny axisin'ny trano.
Ireo efi-trano ireo dia miova arakaraka ny tranony, indraindray misy efi-trano telo, indraindray efatra na dimy, ary enina angamba. Misy vato marindrano sy vato mijoro lehibe, Inoana fa nisy tafo ary ny zava-drehetra dia manondro fa ny fomba fanamboarana dia manambara be pitsiny. Ny vato ampiasaina dia misy eo an-toerana, izany vatosokay vatohara ho an'ny rindrina ivelany ary a vatosokay malefaka kokoa ho an'ny atitany sy ny haingon-trano. Eny, misy haingon-trano vitsivitsy ao anatin'ny trano ary mampiharihary fahaizana asa tanana ihany koa izy ireo.
Amin'izay singa haingon-trano Miteny isika? Ny lamba dia voaravaka lavaka, motifs spiral, hazo, zavamaniry ary biby dia tsy ampy. Inoana, avy amin'ny famolavolana sy ny haingon-trano, ireo trano taloha ireo dia nahatanteraka ny sasany anjara andraikitra amin'ny fombafomba ho an'ny fiarahamonina nanangana azy ireo.
Saika ny fampahalalana rehetra ho hitanao momba ny tempoly megalithic any Malta dia avy amin'ny arkeolojia ortodoksa. Ity siansa ity, avy amin'ny famakafakana ny taolana, sombin-keramika ary marika samihafa, dia nametraka izany Nipetraka tany Malta ny olombelona nanomboka ny taona 5200 talohan'i Kristy. Nipetraka tao anaty lava-bato izy ireo fa nanorina trano sy vohitra iray manontolo taty aoriana. Inoana fa mihoatra ny latsaka taorian'ny 1600 taona nahatongavan'izy ireo tao amin'ilay nosy dia nanomboka ny fananganana ireo tempoly goavambe ireo izy ireo, izay tsy hitantsika afa-tsy zavatra mitovy amin'ny taolany.
Rehefa afaka fotoana fohy dia be voninahitra sy be voninahitra toa izany Manodidina ny 2300 talohan'i JK dia nanomboka nihena haingana io kolontsaina mahafinaritra io.ary. Fa maninona Inoana fa noho ny famongorana ala tanteraka, ny fahaverezan'ny tany, ny isan'ny mponina betsaka kokoa ary ny fampiasana loharanon-karena ho an'ny fambolena… Misy koa ny resaka mosary, fifanolanana ara-tsosialy manodidina ny fivavahana mpampijaly na ny fahatongavan'ireo mpanafika avy any ivelany. Na izany aza, na inona na inona nitranga, ny kolontsain'i Malta dia nihena ary mandra-pahatongan'ny fahatongavan'ireo olona tamin'ny vanim-potoana varahina tamin'ny taona 2000 BC. C nilaozana ny nosy.
Ny rava malaza indrindra dia ny an'ny Tempolin'i Hagar Qim sy ireo ao Mnajdra, any amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Malta, mijery ny ranomasina mankany amin'ny Nosy Filfla tsy misy mponina sahabo ho dimy kilometatra miala azy. Ity lemaka ity dia manana karazana vatosokay roa, ny iray ambany sy mafy kokoa izay ampiasaina ao Mnajdra ary ny iray avo kokoa sy malefaka kokoa izay ilay ampiasaina ao Hagar Qim.
Hagar Qim Midika izany hoe 'vato mijoro' ary alohan'ny hisehoan'ny rava dia voasaron'ny dongon-tany izy ireo izay vato vitsivitsy mitsangana no mivoaka avy eo ambony. Ny tempoly dia inoana fa natsangana tsikelikely teo anelanelan'ny 3500 talohan'i JK sy 2900 talohan'i JK io no manana vato lehibe indrindra eto amin'ny nosy. Misy vato lehibe iray metatra fito metatra sy telo metatra ary milanja 20 taonina eo ho eo.
Ny sisan-javatra rava dia nozahana voalohany tamin'ny 1839 ary ny fikarohana fikarohana lehibe kokoa dia natao teo anelanelan'ny 1885 sy 1910. Amin'ny tranga lNy tempolin'i Mnajdra dia sahabo ho 500 metatra andrefan'ny Hagar Qim, eo akaikin'ny tendron'ilay havoana mitazana ny ranomasina. Ny tranobe dia manana trano roa, tempoly lehibe misy efitrano elliptika roa ary tempoly kely misy efitrano hafa.
Tempolin'ny fandinihana astronomia? Afaka. Ny vavahady lehibe dia miatrika atsinanana sy amin'ny fararano sy ny lohataona equinoxes ny taratra voalohany amin'ny masoandro dia milatsaka amin'ny vato amin'ny rindrin'ny efitrano faharoa. Amin'ny fahavaratra sy ny ririnina, ny masoandro dia manazava ny zoron'ireo andry roa izay eo amin'ilay andalana izay mampifandray ireo efitrano lehibe.
Tena mahafinaritra izany nanomboka teo samy mifanitsy amin'ny toeran'ny astronomia ireo toerana misy ny tempoly ary tsy indray mandeha isan'andro fotsiny fa imbetsaka: ao Hagar Qim, ohatra, amin'ny marainan'ny andro dia mamaky ilay fantatra amin'ny hoe oracle ny taratry ny masoandro ary mamolavola ny sarin'ny kapila iray izay mitovy habe amin'ny hita amin'ny. volana ary, rehefa mandeha ny minitra dia mitombo ilay kapila ary lasa ellipse. Misy fampitandremana hafa amin'ny filentehan'ny masoandro.
Ny marina dia tsy dia fahita firy ireo fanontaniana momba ny kintana ireo satria raha mino ny arkeolojia ortodoksa isika amin'izany fotoana izany…. Misy data tsy mandeha. Ny mpikaroka sasany dia manome hevitra hafa mahaliana kokoa: ny fotoana faratampon'ny masoandro amin'ny solstices dia tsy raikitra fa miovaova arakaraka ny zoro, mitombo na mihena, ny axis an'ny Tany amin'ny fifandraisan'ny planin'ny orbitany manodidina ny masoandro. Ireo fiovana ireo dia fantatra ara-teknika amin'ny anarana hoe "the obliquity of the ellipsis" ary manana ambaratonga 23 degre sy 27 minitra izy.
Noho izany, tsingerina lehibe iray maherin'ny 40 taona no naseho ary raha efa antitra ny fampifanarahana dia hampiditra hadisoana naterak'io fiovana io izy. Avy amin'ity lesoka ity dia azo atao ny manisa ny daty marina nananganana ny tempoly.
Noho izany, raha ny amin'ireo tempolin'i Mnajdra dia tsara ny fampifanarahana azy ireo nefa tsy dia lavorary loatra. Ka ny kajy dia manondro fa ny fampifanarahana tonga lafatra dia tsy maintsy nitranga farafahakeliny indroa tao anatin'ny 15 taona lasa: indray mandeha tamin'ny 3700 talohan'i JK ary iray talohan'izay, tamin'ny 10.205 talohan'i Kristy. Izy ireo dia tena antitra noho izay voalaza.
Tena tsy fahita firy ... Fa ny manampy zava-miafina dia ny mihoatra ny fifandraisany amin'ireo kintana Ny tempolin'i megalithic any Malta dia manambara fahaizana be loatra amin'ny matematika sy ny teknika. Fantatrao ve? Mety tsy izany, satria ny zavatra mifandraika amin'ny kintana, matematika, ary ny injeniera efa vita amin'ny ankapobeny dia ivelan'ny arkeolojia ortodoksa. Ary koa, tsy misy zavatra eto amin'izao tontolo izao toa izany ny fisiany mihitsy dia manaitaitra.
Ary farany, tsy afaka manadino ny momba ny Tempolin'i Hal Saflieni, fantatra amin'ny hoe ny Hypogeum. Manana haavon'ny tany ambanin'ny tany 12 metatra ny halaliny, tohatra miolikolika izay midina ary efitrano roa fantatra amin'ny anarana hoe Oracle sy ny Sancta Sanctorum. Misy koa ny Tempolin'i Tarxien, ao anatiny a sarivongana goavambe miaraka amin'ny hahavony roa metatra sy sasany hafa, vita batemy ho toy ny Reny Andriambavy.
ny Tempolin'i Tas-Silg sy Tempolin'i Skorba ary ireo lalamby hafahafa voasokitra avy amin'ny tany hita any amin'ny faritra maro any Malta ary miangona ao amin'ny ranomasina. Toy ny marika kodiarana izy ireo nefa azo antoka fa tsia. Ary inona avy ireo? Eny, zava-miafina hafa.
Ary mazava ho azy, raha te hahalala bebe kokoa momba ny ahiahy ianao, ny fanentanana, ny tolo-kevitra, ny fiheverana ary bebe kokoa fa manodidina ny tempolin'i megalithic any Malta dia misy boky sy tranonkala mahaliana maro. Ny fomba voalohany nanatonana an'ity zava-miafina ity dia avy amin'ny tanan'ny klasika iray: Erich Von Däniken.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Malta » Tempolin'i Megalithic any Malta
Aiza no handeha hiala sasatra any Espana?